It is me. Ko Niknayman.: လမင်း နှင့် ကြယ်တစ်စု သို့ပေးစာ။
ကောင်းကင်ပြုံးဖို့ ဟောင်းစင် ဆုံးချင်သူ။
ကောင်းကင်ဝင်းဖို့ ပြောင်းပြင် လင်းချင်သူ။
ကောင်းကင်အဖို့ ဟောင်းတွင် နေချင်သူ။
ကြယ်စု လမင်း ပြည်တွင်လင်း
(ရေးသားသီဖွဲ့ သူ - အဖြူရောင်လူ (၂၇၊၀၁၊၀၈)။
Posted by Ko Niknayman at 6:11 AM